Talooyin ku saabsan Bilawga Kooxda Bixinta Goobta Shaqada - Cunnooyinka Lugaha
Tilmaamaha lagu Bilaabayo Kooxda Gaarsiinta Goobta Shaqada
Miyaad ku faraxsan tahay fikradda ah inaad bilowdo Kooxda Bixinta Goobta Shaqada, laakiin miyaad la yaabban tahay sida fikradahaaga ficil loogu fulinayo? Waxaad timid meeshii saxda ahayd!
Cunnooyinka Lugaha Laydhka waxay leeyihiin taariikh dheer oo guul ah iyada oo ah fursad iskaa wax u qabso oo shaqo oo sahal u ah hirgelinta iyo maaraynta. Sababtoo ah cuntada ayaa la keenaa inta lagu jiro saacadda qadada, xubnaha Kooxda Bixinta Goobta Shaqada waxay ku qaataan waqti yar xafiiska.
Waxaan ku siineynaa xoogaa ilo ah oo kaa caawin kara inaad u sharaxdo faa'iidooyinka ku jira bilaabista Kooxda Bixinta Goobta Shaqada ee dadka la shaqeeya iyo go'aan sameeyayaasha goobtaada shaqada. Xor ayaad u tahay inaad soo dejiso iyaga oo aad la wadaagto dariiq kasta oo aad aragto inuu ku habboon yahay:
A Tilmaanta Kooxda Bixinta Goobta Shaqada, kaas oo ka hadlaya sida loo bilaabo koox iyo sida habka cuntada loo gaarsiiyo ay u shaqeyso.
A bandhigid si loo wadaago sameynta koox gaarsiinta goobta shaqada.
A video oo ku saabsan faa'iidooyinka bilaabista Kooxda Bixinta Goobta Shaqada.
Haddii aad xiiseyneyso inaad bilowdo Kooxda Bixinta Goobta Shaqada laakiin aad jeceshahay hagitaan dheeri ah, waan ku faraxsanahay inaan ku caawinno! Si aad u bilowdo, buuxi foomkeena Kooxda Gudbinta Goobta Shaqada ama naga soo wac (612) 623-3363 wixii su'aalo ah.